Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.3.10 Sensitive
Utano yveshuwarisi makambani ane tsanangudzo yakazara pamusoro pekurapa kwakagamuchirwa nevatengi vavo. Iyi ruzivo inogona kushandiswa pakutsvakurudza kwakakosha pamusoro pehutano, asi kana ikava yeruzhinji, inogona kutungamirira kukuvadza mupfungwa (semuenzaniso, kunyadziswa) kana kukuvara kwehupfumi (semuenzaniso, kurasikirwa nebasa). Vazhinji zvimwe guru mashoko manyuko dzine mashoko inonyatsoziva, inova chikamu chikonzero nei vari kazhinji dzisingambosvikiki.
Zvinosuruvarisa, zvinosvika kuva zvinyengeri kusarudza kuti ndeupi ruzivo rwechokwadi (Ohm 2015) , sezvakaratidzwa neNetflix Prize. Sezvandinoda kurondedzera muchitsauko 5, muna 2006 Netflix yakabudisa zvikwereti zvemufirimu mamiriyoni zana zvakapiwa nhengo dzinenge 500 000 uye dzakasununguka apo vanhu vanobva munyika yose vakagadzirisa maitiro ekugadzirisa iyo Netflix kukwanisa kurumbidza mafirimu. Asati asunungura deta, Netflix yakabvisa chero ruzivo rwakananga ruzivo rwekuziva, rwakadai semazita. Asi, vhiki mbiri chete mushure mekunge dhesi yacho yakabudiswa Arvind Narayanan naVitaly Shmatikov (2008) vakaratidza kuti zvaive zvichikwanisa kudzidza nezvevanhu vanoona mafirimu emagetsi vachishandisa zvinyengeri zvandichakuratidza muchitsauko 6. Kunyangwe mutambudzi aigona kuwana kuonekwa kwevhidhiyo yemunhu, pane izvo zvisingaoneki sechinhu chakavanzwa pano. Kunyange zvazvo izvi zvingava zvechokwadi kune vose, nokuti vamwe vevamwe 500 000 vari mudasetet, kukoshesa mafirimu kwaive kunetseka. Zvechokwadi, mukupindura kusunungurwa nekudzokororazve kwemashoko, mukadzi akabatwa nemadzimai akabatana akabatana nekirasi-action suit neNetflix. Hezvino iyo dambudziko rakaratidzwa sei mumhosva iyi (Singel 2009) :
Muenzaniso uyu unoratidza kuti panogona kunge kune ruzivo rwekuti vamwe vanhu vanofunga kuti vanoziva mukati mezvinhu zvingaita seine benign database. Uyezve, zvinoratidza kuti kudzivirira kukuru uko vatsvakurudzi vanoshandisa kuchengetedza zvakanyanya data-de-identification-vanogona kukundikana nenzira dzinoshamisa. Iyi pfungwa mbiri dzakagadzirwa zvakanyatsonaka muchitsauko 6.
Chinhu chekupedzisira kuchengeta mupfungwa pamusoro pe data yakajeka ndeyekuti kuunganidza pasina kubvumirwa kwevanhu kunomutsa mibvunzo yehutsika, kunyange kana pasina kukuvadza kunokonzerwa. Zvakafanana nekuona mumwe munhu achigeza pasina kubvumirwa kwake kunogona kuonekwa sekuputsa kwehupfumi hwomunhu iyeye, kuunganidza ruzivo rwakanyanya-uye yeuka kuti zvakaoma sei kuti zvigadzirise zvinonzwisisika-pasina chibvumirano zvinoita kuti zvigadziriswe zvingangodaro. Ini ndichadzoka kumibvunzo pamusoro pehumwe muchitsauko 6.
Mukupedzisa, hurukuro huru ye data, yakadai sehurumende uye mabhizimisi ekutora zvinyorwa, hazvisi zvisikwa zvechinangwa chekutsvakurudza kwevanhu. Iyo huru dhesi yezvinyorwa zvezuva ranhasi, uye zvichida mangwana, inowanzova nemafungiro gumi. Zvizhinji zvezvinhu izvo zvinowanzoonekwa sezvakanaka pakutsvakurudza-huru, nguva dzose-uye, uye zvisingaiti-zvinouya kubva muzviri mumakambani emakore ezve digital uye hurumende inokwanisa kuunganidza damba pachiyero chakanga chisingaitike kare. Uye zvizhinji zvezvinhu izvo zvinowanzoonekwa sezvakaipa pakutsvakurudza-kusina kukwana, kusingaoneki, kusingarevi, kukanganisa, kushandiswa kwezvakagadziriswa, kusvibiswa, kusvibiswa, uye kunzwisisika-kunobva pakuziva kuti data idzi hadzina kuunganidzwa nevatsvakurudzi vevatsvakurudzi. Kusvika ikozvino, ndakataura nezvehurumende uye zvebhizimisi data pamwe chete, asi pane zvimwe zvakasiyana pakati pezviviri. Mune ruzivo rwangu, ruzivo rwehurumende runoita kunge rwusingarevi ruregerero, zvisiri zvigadziriswe zvisinganzwisisiki, uye zvishoma kuderedza. Icho rumwe ruvoko, bhizimisi rehupfumi marenda anowanzove ari nguva dzose-pane. Kunzwisisa izvi gumi zvinowanzoita danho rekutanga rinobatsira pakudzidza kubva kune dhomashoko makuru. Uye zvino tinotendeukira kumagadziro ekutsvakurudza atingashandisa nedata iyi.